Isitokhwe seAirTag kwiVenkile yeApple siyazinzisa | Ndisuka mac
Ngexesha lokumiliselwa kwee-AirTags akukho mntu unokucinga okanye phantse akukho mntu unokucinga oko ezi zixhobo zokufumana iApple ziya kuxhoma uphawu 'lwangaphandle kwestokhwe' kwiiveki zokuqala ezimbalwa. Inkampani yaseCupertino yabetha isikhonkwane entloko ngale mveliso kwaye kubonakala ngathi ngaphandle kokuthatha ixesha elide ukubakho kwaye emva kwamarhe amaninzi abantu babeqinisekile ukuba bazithenge.
Ibango lisephezulu kodwa kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iStock semveliso okanye mandithi ezi AirTags kwiivenkile zeApple zizinzile. Kungenxa yoko abo basebenzisi abafuna ukuthenga ii-AirTags kwaye babe nevenkile yeApple baya kuba nakho ukwenza oko kwangoko Ngaphandle kokulinda naluphi na uhlobo, ewe, abayi kuba nakho ukukrola, oku kuya kwenziwa ngewebhu kwaye nantsi kukho ukulibaziseka.
Abasebenzisi abafuna ukukrolwa okanye kunoko benzelwe ii-AirTags kuya kufuneka balinde malunga nesiqingatha sesibini sikaJuni ukubamkela ekhaya. Ngokusengqiqweni, oku kulibaziseka kwexesha lokuhambisa kunokutshintsha kuxhomekeke kwiintsuku, kodwa ngoku imihla ephawulwe ngoJuni 11 ukuya kuJuni 18.
Impumelelo efunyenwe sesi sixhobo se-locator ngokungathandabuzekiyo iyothusa kubasebenzisi abaninzi, kodwa emva kwamarhe amaninzi kunye nokuvuza okuninzi, ukuba bebengasikhululanga kwesi sihlandlo, inkampani ngeyiphulukene neentengiso ezininzi, ukuze sithi kwakhona I-Apple yabetha isikhonkwane entloko kunye nemveliso yayo entsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Isitokhwe seAirTag kwiVenkile yeApple siyazinza